Internet Ministries - Mahofisi
Nhoroondo yedu yekunyora ndeye yakagadzirirwa chete machechi aKristu uye hakuna mumwe. Hatingarevi makereke anoshandisa zviridzwa mumimhanzi mukunamata kwavo, uye kana chechi yako ikashandisa zita rakasiyana ndapota usaisa pasi pano.
Usati watarisa ruzivo rwechechi yako kana kuita chero zvarudzo zvese iwe unofanira kutanga kuisa ku "Account Account". Izvi zvinokubvumira kuti iwe usvike pakuisa mazano eungano yako mune zvinyorwa zvedu nguva nenguva sezvaunoda. Mutengo webasa wegore negore we $ 29 (USD) inodiwa. Pawakagamuchira kubhadhara iwe uchakwanisa kuisa data yako mu "Worldwide Directory yeChechi yaKristu" uye "Machechi aKristu Online Online" (makereke ane mawebsite) pasina mari yakawedzerwa gore rese.
Iwe unogona kubhadhara "Account Yenyu" yako nekadhi yebhengi kana kadhi rechikwereti. Internet Ministries inoshandisa sevhavha yakachengeteka kuburikidza nePayPal.com.
Kubhadhara kwako kuchatibatsira kuti tirambe tichiita basa rinokosha kumachechi aKristu kuburikidza nenyika.
Dai Mwari akukomborerai, uye ndinokutendai nekubatanidza data yeungano yenyu mu "Worldwide Directory yemachechi aKristu" uye "Chechi yaKristu Online Directory".
Tinogona kubatsira. Yedu paIndaneti Website Builder iri nyore uye isingashandisi kushandiswa neipi yebhadharo yedu yekubhadharwa kwebhu. Kana zvichidikanwa, tinokwanisa kugadzira webhusaiti yehutaneti nebhadharo shoma. Click pano kana paIndaneti logo pane mamwe mashoko.